Fagersta | Informationsverige.se
Dheeraad ku saabsan Iswiidhan
Buuga "Om Sverige"
U soo guurida dalka Iswiidhan
Ishexgalka dalka Iswiidhan
Taarikhda Iswiidhan - laga soo bilaabo waagi barafka ilaa qarniga casriga ah
Dalka Iswiidhan iyo xilligii 1900:meeyadii
Ma jiraan wax dalka Iswiidan/ummadda iswiidishka u gaar ah?
Caadooyinka iyo ciidaha dalka Iswiidan
Munasabado ciido waaweyn ah oo la xuso nolosha oo shan
Juqraafiga, ganacsiga iyo dhismaha guud
Guryaha iyo deggaanada
Bey'adda, dabiicada iyo dhawrista deegaanka
Habka ay degmadaadu u shaqayso
In shaqo la raadsado
In aad furato shirkad gaar ah
Ceeymiska shaqo la'anta
In canshuur la dhiibo
Ceeymiska bulshada ee guud
Ku noolashada itaaldarrada
Waxbarashada dadka waaweeyn
Wakhtiyada firaaqada iyo ururrada bulshada
Sinnaanta dadka iyo xuquuqda aadanaha
Ka hortaga Takooriska
Qoyska iyo qofka
Xoog uu sheegadka ragga uu geeysto dumarka iyo ehelka dhexdiisa
Sida qoys loo dhisto iyo sida carruur dalka Iswiidhan loogu korsado
Xanaaneeynta caruurta iyo da' yarta
Dugsiyada iyo demoqraddiyada
Kaalmo-dhaqaalaha loogu talagalay qoysaska
Waa maxay demoqraddiyada?
Horumarka demoqraddiyada Iswiidhan
Hab-dhiska demoqraddiyada Iswiidhan
Xisbiyada iyo fikradaha siyaasadeed
Hab-dhishka doorashada Iswiidhan
Waa maxay caafimaadka?
Khamriga, maandooriyayaasha iyo tubaakada
Daryeelka caafimaadka iyo bukaanka Iswiidhan
La kulanka daryeelka caafimaadka
Xaggee la xarireeysaa?
Haddii aadan ku qanacsanayn
Hoowlo iyo dheef loogu tala galay waayeelada
Hawlaha gudaha Iswiidhan (Aktiviteter i Sverige)
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Västmanlands län / Fagersta
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 18 12 2020
Fagersta waa sahlan tahay in lagu noolaado. Degmada waxeey lee dahay amaan, wada shaqeeyn iyo aaminaad-mustaqbaleed. Waxeey uu dhaw dahay dabiicada iyo dhaqanka. Waqti fiican ayaa loogu hayaa dadka Fagersta dhamaantood. Isdhex galka waa qeeyb caadi ah oo ka mid ah dhisada bulshada Fagersta.
310 kiilomitir oo laba jibaaran
Masaafada u jirta magaalada waaweyn
Västerås 65 kiilomitir
Örebro 103 kiilomitir
Borlänge 71 kiilomitir
Stockholm 171 kiilomitir
Ka arag khariidad
Bogga internetka degmada
Fagersta waxeey lee dahay guriyaal la kireeysto ee degmada lee dahay iyo kuwo madaxbanaan. Sido kale waxaa jiro ururo badan ee milkiyada guriga. Waxaad warbixin dheerad oo ku saabsan degaan ka heleeysaa bogga degmada.
Hel shirkadaha guryaha iyo guryaha
Meego luqadood oo kala duwan ayaa looga hadlaa magaalada
Koox-luuqadeedka ugu weeyn ee degmada Fagersta waa afka finland, af carabi iyo af soomaali.
Jaaliyado iyo ururu
Fagersta waxeey lee dahay ururo badan oo kala duwan ee dhanka jimicsiga, hawlaha dibada iyo dhaqameedka. Tusaale ahaan waxaa jiro ururuka Islaamiga, ururka boolaandeeyska Örnnästet iyo ururka soomaalida Fagersta. Bogga degmada waxaad ka heleeysaa diiwaan ee ku jiraan ururada dhamaantood.
Ka baar diiwaanka shirkadaha
Maxaa ka ag dhaw
Dukaamo badan ayaa ku yaalo Fagersta halkaasi oo ka adeegan karto cunto iyo wax yaalo kale sidii maacunta oo kale. Waxaa ku yaalo dukaamo dhar, goob baabuur lagu gado, dukaan nal iyo in kale oo aad uu baahan karto. Waxaa jiro dukaamo alaab gacan labaad leh oo aad sicir yar ku heli karto. Maktabad, xafiiska shaqada, xafiiska bulshada, qasnada ceeymiska iyo xafiiska canshuuraha kuligood si sahlan ayaa lagu heli karaa. Bogga degmada waxaa laga raadin karaa shirkado kala duwan.
Shirkadaha ku yaala degmadan
Degmada Fagersta oo dhan waxaa ku yaalo dugsiyaal xanaano oo badan. Waxaa ku yaalo dugsi xanaano oo furan afar iyo laabatan saac. Warbixin dheer ah oo ku saabsan dugsiyadeena xanaaneed oo dhan waxeey ku jirtaa bogga degmada. Sido kale waxaa jirto xarun-reer oo kooxax-reereed leh iyo goob kulan oo loogu tala galay qofka leh caruur uu dhaxeeyso 0 ilaa 1 sano. Bogga degmada ayaa ka heleeysaa warbixin dheeraad oo ku saabsan hoowlahaas.
Sido kale waxaa jiro dugsi xanaanad oo furan, kana mad ah hoowsha kaniisada. Bogga ururka diimeed ee Västanfors Västervåla ayaa ka heleysaa warbixin dheerad oo taasi ku saabsan.
Akhri dheeraad ku saabsan dugsiga xanaanada iyo hawlaha kale ee waxbarasho.
Bogga ururka diimeed ee Västanfors Västervåla
Dugsiyada hoose-dhexe iyo dugsiyada sare
Degmada waxaa ku taalo 4 dugsiyaal hoose. Bogga degmada ayaa ka heleysaa warbixin dheeraad ah oo taasi ku saabsan. Sido kale waxaa jiro dugsi hoose oo gaar ah, looguna tala galay caruurta leh baahi gaar ah, warbixin dheeraad ah oo taasi ku saabsan waxaad ka heleeysaa bogga degmada.
Degmada Fagersta waxaa ku yaalo hal dugsi sare. Waxeey sido kale hayaan waxbarashada iswiidhishka loogu tala galay soo galooytiga, sfi. Warbixin dheeraad ah oo ku saabsan dugsiga sare iyo warbarashada-sfi waxaad ka heleeysaa bogga degmada.
Akhri dheeraad ku saabsan dugsiga hoose-dhexe ee degmadan.
Akhri dheeraad ku saabsan dugsiga sare ee degmadan.
Dugsiga sare waxeey hayaan waxbarasho dhanka iswiidhishka soo galooytiga, sfi. Sido kale halkaas waxaa ka jiro waxbarashada dadka waa weeyn, waxeeyna la wada shaqeeyaan jaamacado kala duwan. Jaamacad kuma dhex taalo Fagersta. Wadashaqeeyn fiican ayaa ka dhex jirto shirkadaha meesha iyo dugsiga.
Akhri dheeraad ku saabsan waxbarashada dadka waaweyn ee degmadan.
Degmadan waxaa laga helaa isbitaal qayb ahaan loo leeyahay si baraayfad ah. Daryeelkan caafimaadka waxaa lagu maamulaa iyadoo wada shaqayn lala leeyahay isbitaalada Västerås iyo Köping. Warbixin dheeraad ah oo ku saabsan Gobolka Västmanland iyo isbitaalka Bergslagssjukhuset Mitt Hjärta waxaad ka helaysaa boggagoda intarnatka.
Hel macluumaadka xiriirka iyo wakhtiyada furitaanka ee rugaha caafimaadka oo ku qoran Hagida daryeelka 1177 Vårdguiden.
Akhri dheeraad ku saabsan dhakhtarka ilkaha.
Haddii loo baahdo turjumaan markii lala xariiraayo degmada, taasi markaas degmada ayaa habeeyneeyso.
Waxeey uu dhawdahay Västerås, Stockholm iyo meelo kale oo muhiim ah. Waa jiran bas iyo tareenba dhaqso kuu geeynaayo meesha aad dooneeyso. Warbixin dheeraad ah oo ku saabsan tareenka iyo baska Västmanland, waxaad ka heleeysaa bogga Västmanlands Lokaltrafik, waxii safar-tareen ku saabsana Tågkompaniet iyo SJ.
VL (gaadiidka dadweynaha ee gobolka Västmanland)
Shaqo iyo ganacsi
Fagersta waxaan dooneeynaa in intii macquul ah kala wataan shirkad gaar ah, taasna si fiirfircooni leh ayaan uga shaqeeynaa. Websidka degmada waxaad ka helaysaa warbixin ku saabsan qofka doonaya in uu furto shikad.
Akhri dheeraad ku saabsan in shirkad gaar kuu ah laga bilaabo degmadan.
Shaqooyinka ka banaan gudaha Fagersta
Tus in ka sii yar
Jag arbetar med målgruppen
© Copyright 2021 Länsstyrelsen Västra Götaland